QUMMANKA UKUNTA: WAXA AY U EG TAHAY, INTA UU LE'EG YAHAY, MIDABKEE AYUU YAHAY, QIIMAHA UU KU BAXO - BEERAHA DIGAAGA
Intee jeer ayey sameeyaan dhirta dhirta
Ukunta ukunta - dareen ah in la helo caanno sii kordhaya. Si ay u dhadhamaan waxay u egyihiin digaag, laakiin cabbirka wayni wuxuu u keenaa raaxo dhab ah. Iyo sidoo kale waa badeecad aad u faa'iido badan oo aad ka diyaarin kartaa suxuunta xiisaha leh. Sidee loo sameeyaa tan, waa maxay dhadhanka dhadhanka leh ee ukumaha, maxaa qiimo leh iyo sababta ay uubashadu u eg tahay, waxaan hoos ku sheegi doonaa.
Goorma ayuu duurjoogtu bilaabmayaa?
Dhamaan dhirta haweenku waxay awoodaan inay bilawdaan laba sano oo nolol ah. Duufaan Afrikan ah ayaa bilaabi karta inay horey u sii dhigaan hal sano iyo badh. Caadi ahaan, marka hore waa kuwa aan xaq u lahayn, shubanku waxay soo baxaan waxayna uur yeelan karaan 2.5-3 sano.
Baro asaasiga ah ee taranka iyo quudinta dharka guriga.
Iyo emu caadi ahaan diyaar u ah inuu dhigo wax aan ka horeyn 40-42 bilood nolosha. Dumarka ayaa marka dambe qaan yeeshay - awooddooda ay u leeyihiin bacriminta waxay bilaabmayaan 4 ama 5 sano jir. Wixii bacriminta ee ugu wanaagsan, xiriirka soo socda waa in la raaco: waxaa jiri doona laba gabdhood oo lab ah.
Waa maxay ukunta dhiiqada?
Noocyada kala duwan ee shimbiraha waxay qaadaan xiniinyaha midab kala duwan, cabbir iyo miisaan. On muuqaalka iyo waxqabadka sidoo kale waxay saameeyaan meesha meesha saariddu dhacdo. Laakiin sidoo kale waxay leeyihiin qaabab caadi ah, tusaale ahaan, qolofka adag, baaxad weyn iyo miisaan, taas oo kala soocaya inta ka hadhay.
Ogow sida ay faa'iido u leedahay iyo sida ukunta dufanka leh.
Dumarka Afrikaanka ah waxay keenaan ukun miisaankoodu yahay 2-2.2 kiilo garaam. Waxay ku deg degtaa maalin labaad, inta badan waxay u dhowdahay casho. Cabbirka tani waa qiyaastii 18 sentimitir. Noocyada kale ee dhirta waxay qaadaan qiyaaso isku mid ah.
Guud ahaan, xajmigu wuu kala duwanaan karaa, miisaanka ukumaha ayaa ka duwan 600 gram ilaa laba kiilo. Waxaa intaa dheer, dumar kasta waxay qaadi karaan labadaba waaweyn iyo kuwa yar yar, dhammaantood waxay ku xiran yihiin xaaladaha xabsiyada, cuntada iyo da'da. Tusaale ahaan, dhallinyarada Nandu waxay aad u yaryihiin waxayna leeyihiin cabbir ilaa 10-12 sentimitir iyo miisaan qiyaastii 550 garaam. Emus u dhig miisaankeedu yahay 1-1.5 kiiloogaraam celcelis ahaan iyo cabbir ilaa 15 sentimitir. Sababta miisaanku waa borotiin, waa ukumaha ugu badan.
Ukumaha oo idil waxay leeyihiin hoy adag oo adag. Sidaas adag tahay in ay u muuqato sida porsel. Sidaa darteed, waxaa badanaa loo isticmaalaa jihada farshaxanka (waa rinji ahaan rinjiyeyn, abuurista quruxda asalka ah, ama xitaa la xoqay).
Ma taqaanaa? Duufaantu waxay noqon kartaa midab badan. Dhalashada Afka Afrika ayaa badanaa caddeynaysa, laakiin Rhea - jaalle ama ku dhowaad dahab, mararka qaarkood waxaa jira sidoo kale hooska casaan-jaalaha ah ee qolofka. Iyo emu waxay noqon karaan kuwo cagaaran guud ahaan, midab madow.
Intaa waxaa dheer, qolofka waa mid aad u iftiimaya, laakiin waa mid aad u adag in la jebiyo, waayo tan waxaa jira xeelad gaar ah. Muuqaal farabadan oo ukun ah, taas oo kala soocaysa nooca dhiiqada ah ee iyaga u keenay, waa midab. Mararka qaarkood waxay la xiriirtaa baaluqa waalidka.
Dufcaddu waa borotiinka yar yar. Beerku waa mid aad u weyn, badanaa wuxuu qabaa wax ka yar seddex meelood meel mugga. Waa hodan huruud ah. Waxyaabaha kalooriga ah ee badeecada oo dhan 100 gram: 118-120 kalori, macdanta borotiinka waa 15.2, content dufanka waa 12 iyo content karbohydrate waa qiyaastii 0.5 gram.
Imisa ukun ayaa dhasha sanadkiiba?
Dhammaan shimbiraha jimicsi laba jeer sannadkii, badanaa xilliga dayrta iyo jiilaalka. Tani waxay dhacdaa laba bilood, inta lagu jiro waqtigaas haweenku waxay si joogto ah u buuxisaa tirada ukunta ee buulka. Taasi waa, haddii dhufaysigu bilaabo bisha Febraayo, dhamaadkeeduna ma iman doono bil ka hor Maarso.
Beeralayda qaar ayaa soo sheegay in bilowga xilliga guga helitaanka uu dhici karo dayrta iyo gu'ga. Xanuunnada la keeno bilowgii ama dhammaadka xilli ciyaareedka by haweeney kasta ayaa laga yaabaa in aan la xaqirin. Xilliga koowaad, haweenku waxay dhigtaa tiro yar oo ukun ah, oo aan ka badneyn 30 jeer.
Muddo hal xilli ah, waxaad ka heli kartaa 50 ilaa 80 ukumo ugu badnaan hal shakhsi. Wax soo saarku waa mid ka mid ah 30-35 sano, waqtigan haweenku si firfircoon ayey u daadinayaan. Heerka macduulku waa 80%, hatchability ku guuleystay 85% kiisaska.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo ururiyo loona kaydiyo ukunta duurjoogta ka hor inta aan la furin, iyo sidoo kale sida leysugu dhejiyo ukunta qalabka guriga.
Caadi ahaan, dhigaya 20 ukun ee ugu horreeya, shimbirta waxay qaadataa nasasho gaaban, iyada oo wareegga wax soo saaraya uu dhammaado. Joogitaanka joogtada ah ee wareegyada caadadu ma socoto ilaa 8-12 maalmood. Waxaa jira mararka qaar marka laga reebo marka haweenku aanay ku degdegin - xaaladdan, iyadu ma hayso caruur dhan xilli kasta. Iyada oo dhammaan xaaladaha loogu talagalay taranka, laga bilaabo haweenka ayaa lagu gaari karaa 5 xabbo sannadkii. Shakhsiyaadka ka mid ah noocyada Afrikaanka ah waxay ku yaalliin godad caadi ah, caadi ahaan 40 ilaa 80 ukumo xilli kasta. Nanda waxaa la dhigaa meelo fudud oo waaweyn, qalabku wuxuu isku maraa 6-7 dheddig, wuxuu siinayaa 15 illaa 40 ukumood xilli kasta.
Diyariga ah ee emu rush ugu yaraan oo dhan iyo dhif ah, waxay ku dhigi karaan 10-20 gogo ', iyo rusheeyaa maalin kasta, hal mar ama sedex maalmood. Muddada kabadan waa celcelis ahaan 1.5 bilood.
Waa muhiim! Marka ay tahay taranka, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo xaqiiqda ah in haddii xilliga xaadirka ah uu qofku siiyay tirada ugu badan ee ukunta, xilli ciyaareedka soo socda ma awoodi doono inuu ku soo celiyo tilmaamahan.
Sidee iyo immisa ayuu ostrichaha u dillaacey ukumaha?
Dumarka ka mid ah duurjoogta ayaa jiifsaday buul caadi ah, ka dibna waxay ku ilaaliyaan midba mid. Tani waa lagama maarmaan, sababtoo ah inta badan jiirka ayaa weeraya buulkeedii, waxyeelaynaaya farcankiisa. Habeenkii, ragga waxay u egyihiin dabada.
Hal buul oo aan ka badnayn 25-30 ukumo ayaa la geyn karaa. Xaqiiqo xiiso leh ayaa ah in haddii hal haween ah ay ku jilciso farcanka kale, ka dibna waxay u dhigtaa ukumaheeda bartamaha buulka, sidaas darteed ilaalinta ilmaheeda.
Celcelis ahaan, noocyada oo dhan shimbiraha ayaa qashinka laga jaraa 30 ilaa 45 maalmood. Carruurtu way yar yahiin, miisaankoodu waa 1 kilo, laakiin aad u firfircoon, isku dayaya in ay raacaan dadka waaweyn meel kasta. Caadi ahaan waqtigan nin raba inuu ilaaliyo farcankiisa, kaas oo quudiya. Dhammaan noocyada kalkaaliyeyaasha ayaa horeyba u horumariyay, jidhkoodu badanaa cufan yihiin midab khafiif ah, ashen, cawl ama caddaan. Ilmaha yaryar ayaa horay u arki kara, iyo dhowr saacadood gudahood ka dib marka ay muuqdaan, ka dib qalajinta, waxay cuni karaan naftooda. Maalinta xigta, waxay horay u raaci karaan waalidiintooda si ay u raadsadaan cunto.
Kharashka hal ukun ee Ukraine waa qiyaastii 250-300 hryvnia. Qolalka waxaa laga iibsan karaa jaban, 130-150 hryvnia. Ruushka, kharashka wuxuu gaari karaa 1500 roon, haddaad iibsato dukaamada. Haddii aad beerta ku qaadato, waxay noqon doontaa mid ka raqiisan laba jeer, taas oo ku xidhan tirada tirada iyo beerta naftiisa.
Waa muhiim! Ukumaha ayaa sidoo kale ka maqan cutub ah (filim meel u dhow qolofka), maxaa yeelay waxay aad ugu nugul yihiin ficilka microbes kaasoo u dhexgalo godadka qolofka. Tani waxay keenaysaa dhimashada embriyaha sare. - qiyaastii 20% ee embriyaha waxay u dhintaan. Dhibaato la mid ah ayaa kacday marka laamaha shimbiraha ee aagga. In jawiga kulul ee dalka hooyo, waxay ahaayeen kuwo ammaan badan.
Dabcan, qiimaha way kala duwanaan karaan, sababtoo ah waxaa lagama maarmaan ah in si toos ah loogu sheego beerta (ama eeg shaxda dukaanka).
Laga soo bilaabo ukumaha dufanka waxaad cuni kartaa suxuunta caadiga ah, sida ukumaha la kariyey, ukunta la kariyey ama la shiilay. Iyadoo habkan loo diyaarinayo, waxaa haboon in la tixgeliyo xaqiiqda ah in caddaan iyo buskud la kariyo wax ka badan hal saac, inta badan waxay qaadataa 90 daqiiqo si aad u karisid.
Caan ka mid ah badeecada ayaa sabab u ah waxyaabo badan oo faa'iido leh:
Waxay leedahay nafaqooyin badan oo badan. Oo iyagu way ka daalaan digaagdarrada kale, maxaa yeelay waxaa loo tixgeliyaa badeecad cunto.
Waxaad karin kartaa mugga buuxa ee badeecada ama qaybaha, saxanka ayaa lagu keydin karaa qaboojiyaha 3-4 maalmood oo kale. Waxaa jira cuntooyin caan ah kaas oo ah waxyaabaha la dubay oo aan la beddelin.
Waxay leeyihiin nolol shelf dheer - 3 bilood.
Dhadhanka ayaa ah mid aad u fiican una fiican, sababtoo ah waxay ku fiicanyihiin diyaarinta suxuunta macaan iyo keega.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah ukunta duurjoogta ayaa ku quudin kara 10 qof, iyadoon loo eegin haddii la kariyay ama ay tahay omelette. Miisaanka mid ka mid ah ukumahaas wuxuu le'eg yahay ilaa 40 digaag caadi ah.
Qaar ka mid ah boorsooyinka ayaa iibsanaya alaabada gaar ahaan loogu talagalay Easter, maadaama ay jirto qashin khaas ah oo loogu talagalay diyaarinta saxanka fasaxyada aan caadiga ahayn: godka ayaa lagu sameeyaa qaybta sare, qayb yar oo ka mid ah qolofka ayaa kala gooni ah, ka dibna wax waliba waa isku dhafan yahay (taas oo ah, borotiinka oo leh qajaanka ayaa si tartiib ah u kiciya), xawaashka waxaa lagu daraa dhadhanka iyo dubista foornada 40-55 daqiiqo. Waxay ku raaxeeysataa magac caan ah oo leh makhaayado qurxoon, halkaas oo ay u diyaariyaan hilibka digaaga oo isticmaalaya cuntooyin kala duwan. Ukunta ukunta ma aha oo kaliya wax soo saarka waxtar leh, laakiin sidoo kale aad ayay u yar tahay. Cuntooyinka xiisaha leh waxaa laga diyaariyey, waxaana mid ka mid ah ukunta loo quudin karaa qoys ballaaran. Waxaana sidoo kale loo isticmaalaa inay sameeyaan waxyaabaha la isku qurxiyo iyo farshaxanka.
Daqiiqad caafimaad leh waxay qaadataa ilaa lixdan iyo sideed sideed sannadkii. Intee jeer ayuu fal-gowska ku dhacaa ukumo? Wax-soosaarkooda ukumaha ayaa leh xilli-u-dhac. Xilliga jiilaalka, inta badan waxaa laga yaabaa in aan si toos ah lahayn ukunta, laakiin guga hore ee dayrta - waa inay noqdaan kuwo dhameystiran! Tirada ukunku waxay ku xiran tahay xaaladaha digaaga, nafaqada iyo caafimaadka. Laakiin marka ay dhammaato, haweenku waxay dhigtaa hal ukun laba maalmood gudahood. Mid ka mid ah tijaabada noocan oo kale ah, habka ugu fudud, waxay miisaankeedu noqon karaa ilaa laba kiilo oo u dhigma saddex ukun digaag ah.
Dhoobabku waxay bilaabaan inay dhalaan 3-4 sano. Laakiin ficilkayaga, waxaa jiray xaalado markii haweenku bilaabeen in ay ukeenayaan ukumaha iyo 2 sano oo yar yar. Xilliga qaboobaha, dhirbaaxadu ma degdegaan, ukumaha ugu horreeya ee ay muuqdaan bisha April. Sida shimbiruhu isku dayaan inay raacaan maahmaahda - ukunta waa qaali u ah Maalinta Masiixa Maalinta Masiixa Dumarku waxay bilaabaan inay dhigtaan 2-3 sano jir, ragga waa awooda bacriminta 4-5 sano ee nolosha. Dumarka Afrikaan ah ee haweenku waxay dhigtaa ukumaha, qiyaastaas oo gaarta 2,200 g, waxay maalin kasta kacsan tahay, badiyaa duhurkii. Wareegga wax-soo-saarku waa mid gaaban waxana uu dhigaa 16-20 ukumo. Iyadoo tiknoolojiyad habboon oo ka mid ah haween ah waxaad heli kartaa 4-5 wareeg ah sanadkiiba. Muddada dhalashada ee ukunta dhirta Afrika waa 42 maalmood. Ka-noqoshadu waxay socotaa 2-3 maalmood. Diyarshaha looma arko iliga ukunta, oo ay jilbaha ku jebiyaan lugahooda xoog leh. Xilliga guga ee ukunta laftirka wuxuu bilaabmaa Maarso-Abriil oo wuxuu soconayaa ilaa Oktoobar. Dhexdhexaadyada u dhaxeeya wareegyada ukumaha leh waa 8-10 maalmood. Celcelis ahaan, dheriga haweenku waxay dhigtaa 50-60 ukumuc oo ukun ah sannadkiiba. Bacrimintoodu waxay gaartaa 80%, hatchability waxay u dhexeysaa 80 ilaa 85%. Sida awoodda taranka, dhammaan dheddigeyaasha oo hoos u dhigaya in ka yar 25 ukumiin bacrin ah sannadka ugu horreeya ee ukunta - waa in la diido. Qaar ka mid ah gabdhaha dhirta badan ayaa ukumo ku dhajiya buulka caanaha ah, waxayna ku jiraan shaqadooda xayawaanka inta lagu jiro maalinta, ragga waxay beddelaan habeenkii. Mid ka mid ah buulkaba, ostrichadu waxay ku kulmi karaan isla waqti isku mid ah 20-25 ukun. Nestlings si wadajir ah, wada arkeen, oo qaro weyn, ilaalinta dhaxan habeenkii. Dhowr saacadood ka dib, chicks, oo la qalajiyey, bilaabaan inay quudiyaan naftooda iyo meel kasta oo ay raacaan shimbiraha waaweyn. Waxaa jira nin leh hanti yar yar.